एक लडाकुको संस्मरणमा बेनी मोर्चा- २: ‘कमरेडहरू, यो ठाउँबाट भागिहाल्नुहोस्, सेना आइसक्यो’ | Khabarpato
काठमाडौं, भदौ २६, २०७८
एउटै लक्ष्य उद्देश्य लिएर हिँडेका क्रान्तिकारीहरूलाई आफ्नै जस्तो लाग्ने, युद्धमा हिँडेका सबै परिवार । कमाण्डर पावेलकी आमाको अथाह प्यार र शुभेच्छा लिएर हामी राधा घिमिरे दिदीकी आमाको घरमा गयौँ । त्यहाँ पनि उस्तै प्यार र ममता पायौँ । त्यसैले होला, सृष्टिले पनि आमाको सिर्जना गरेको, जसलाई दिएर कहिल्यै नसकिने प्यार र ममता दिएको हुन्छ । विशाल हृदय हुन्छ आमाहरूमा ।
केही दिन त्यहीँ बस्ने निर्णय भयो । त्यो समयलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले हामी प्युठानको सदरमुकाम मुर्कटी भिङरी, रोल्पा र प्युठानको सिमानामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाहरूले संस्कृतिकर्मीहरूलाई मारेको रहेछ, त्यही तिथि पारेर जिल्ला पार्टीले मशाल जुलुस, फायरिङ जुलस गर्ने योजना रहेछ । त्यो जुलुसमा मैले टुटु राइफल पड्काएकी थिएँ ।
प्युठानको प्रख्यात ठाउँ स्वर्गद्वारीलगायतका धेरै ठाउँहरूमा घुम्यौँ, जुन युद्धकालमा सामरिक हिसाबले चर्चित थिए । मैले दिदीसँग रोल्पा, रुकुम घुम्न जाने इच्छा राखेँ । दिदीले मेरो आग्रहलाई स्वीकारेर जाने तयारी गर्‍यौँ ।
घरबाट निस्किने दिन आमाले झोलामा मकै, गहँु र चामलबाट निर्मित सातु झोलामा हालिदिनुभयो । हामी खुसी हुँदै आफ्नो यात्रातर्फ लाग्यौँ । हामी प्युठानबाट अरुण खोलाको तिरैतिर रोल्पातर्फ लाग्यौँ । अरुण खोला सुसाइरहेको थियो । खोलाको किनारसँगको सामीप्यमा दुश्मनका क्यापहरू छल्दै हामी प्युठान र रोल्पाको सिमानाबाट रोल्पातर्फ लाग्यौँ ।
त्यही क्रममा हामी तत्कालीन शाही सेनाद्वारा गिरफ्तार गरी हत्या भएका शिक्षकको घरमा पुग्यौँ । त्यो बेला हाम्रो साथमा सल्यानका तारानाथ कमरेड पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँको कार्यक्षेत्र रोल्पाको दक्षिण-पश्चिम भेगमा थियो । पश्चिम सबै हिसाबले जनयुद्धको विशेष महत्त्व राख्ने ठाउँ थियो नै ।
हामी प्युठानबाट हिँडेर रोल्पाको सिमानामा पुग्यौँ । अलिक अनौठो अनुभूति हुनु स्वाभाविक थियो मलाई । तराईका समथर फाँटहरूमा हाम्रो ब्रिग्रेडको कार्य क्षेत्र, त्यसमा पनि १५ वटा बटालियनको कार्यक्षेत्र तराई भएका कारणले पनि मलाई पहाड चढ्न निकै कठिन भएको थियो ,
पश्चिमको भूगोल नाक ठोकिने उकालो चढेर माथिको डाँडामा पुग्यो फेरि घुडा जोडिने ओरालो झरेर फेरि अर्काे खोलामा पुग्नुपथ्र्यो । दुश्मनका संभावित नाकाहरूलाई पार गर्दै हामी रोल्पाको होलेरी चौकी नजिकै पुग्यौँ । म हिँड्न नसक्ने भएकी थिएँ तर पनि मलाई अर्काे ऊर्जा तत्कालै पैदा भयो- जनयुद्ध सुरु गर्दा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने ठाउँमा जाने कुराले उत्साहित तुल्यायो ।
रोल्पाको होलेरी चौकी नजिक पुगेर गर्वको अनौठो रक्त प्रवाह भयो शरीरमा । निकै सुन्दर दृश्य मनमा कुदिरहेको थियो । होलेरीको बजारमा रहेको सडकमाथिको डाँडा, जहाँ माओवादी पार्टीले जनयुद्ध सुरुवात गर्ने दिन आक्रमण गरेको चौकीका भग्नावशेषहरू बाँकी थिए । उत्साहका साथ सबै दृश्यहरू नियालिरहेकी थिएँ, आँखा दाङबाट आउने सडकतिर पुगेछ ।
पहिला त विश्वास नै लागेन- शाही नेपाली सेनाहरू आएका हुन् भनेर । हामी करिब ५०० मिटरको दूरीमा थियौँ । लामो दूरीको मार गर्ने हतियारको किलिङ रेन्जभित्र हामी परिसकेका रहेछौँ । त्यही समयमा स्थानीय साथी आएर भन्नुभयो, ‘कमरेडहरू, तपाईंहरू यो ठाउँबाट भागिहाल्नुहोस् । सेना आइसक्यो ।’
हामीलाई बाटोका बारेमा केही थाहा थिएन, कता गयो भने कहाँ पुगिन्छ भनेर । स्थानीय साथीले हामीलाई दहबन जाने बाटो देखाएर फर्किए । हामी बाटैबाटो दहबनतिर हिँड्यौँ । शाही सेनाहरू होलेरी बजारमा आएर छापा मार्न सुरु गरे ।
दहबनको बाटो हुँदै सल्यानतर्फ लाग्यौँ । सल्यानको झिमरुक टावरको नजिक पुग्न लाग्दा गोधूलि सन्ध्याले हामीलाई स्वागत गरिरहेको थियो । यहाँ हामी ५ जना जम्मा भयौँ । झिमरुक टावरको मुनि उभिएर एक पटक फेरि त्यही विशाल टावर राखेको डाँडालाई हेर्दा भग्नावशेष टावर डाँडामा ठिंग उभिएर हामीलाई नियालिरहेको आभाव भयो ।
त्यस दिन हामी रुकुमको खोलागाउँ नजिकै गएर बास बस्यौँ । त्यस रात खाएको मकैको रोटीको याद अझै पनि उत्तिकै स्वादिष्ट लाग्छ ।
भोलिपल्ट हामी रुकुमको चौरजहारी नजिकै तारानाथ शर्मा कमरेडको घरमा पुग्यौँ । त्यही बेलामा हो मैले रुकुमको चौरजाही फाँट नियालेको, मशाल जुलुसमा भाग लिन जाँदा राधा घिमिरेले अँध्यारो रातमा पनि मलाई खोजेर सँगै लैजानुभएको । दुश्मनले लखेट्दा नहरको पानीमा पसेर लुकेको । खोलागाउँ मुसिकोट जाजरकोटको खलङ्गा जुनी कम्युन र अजम्बरी कम्युनलाई हृदयभरी सजाउँदै मीठो प्यारले चुमेको ।
१८ वर्षपछि सम्झिन्छु त्यति बेलाका जुनी र अजम्बरी कम्युन के भए होलान् अहिले ? सत्ताको भत्तामा रमाएपछि हिजोका ती अजम्बरी उपलब्धिहरू कहाँ रहन्छन् र ? सबै भाँडमा गए । सानो भेरीको किनारैकिनार पश्चिमका जनताको अनगिन्ती वर्गीय मायालाई मनमा सजाउँदै हामी एक सातापछि रुकुमको महतगाउँ हुँदै रोल्पाको थवाङ पुग्यौँ ।
रोल्पा, त्यसमाथि पनि थवाङ, जुन जनयुद्धको उद्गम थलो हो, मनमा हजारौँ भावनाहरूको प्रतिनिधित्व भयो । किलो सेरा २ अप्रेसनका बेलामा प्रहरीले आगो लगाएको त्यो सुन्दर बस्ती, काला दलिन र निदालका भग्नावशेषहरू, संकटकालमा शाही सेनाले भत्काएका सयौँ घरहरू । घरमा वृद्ध आमाबा मात्र । जनयुद्धमा सयौँ वीर योद्धाहरूले रगत बगाएको बस्ती थवाङ स्मारक गाउँको बीचमा बनाइएको पाहुना घर । यस्तैयस्तै सुन्दरताले भरिपूर्ण थियो थवाङ त्यो बेला ।
थवाङले नेपामा संचालित १० वर्षे जनयुद्धलाई ठूलो गुन लगाएको छ । माओवादी पार्टीका नेता र कार्यकर्ता हँु भन्नेहरूले कहिल्यै पनि सक्दैनन् थवाङको ऋण तिरेर । त्यो रात राधा धिमिरे र म त्यो पाहुना घरमा बस्यौँ । पश्चिम गएपछि सबैभन्दा पहिला भेटेको कमाण्डर हुन् हरिभान पुन (क. बरुण) उनी जनमुक्ति सेनाको ब्रिग्रेड कमाण्डर थिए । उनले नै भनेका हुन् मलाई बेनीमा फौजी आक्रमण हुँदै छ भनेर । उनीसँग भेटेपछि तय भएको हो मेरो बेनी मोर्चामा जाने यात्राको ।
अहिले सम्झिन्छु, त्यो बेला पनि हाम्रा परिवारहरू त थिए तर मलाई बाआमाले मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भनेको कुरामा पटक्कै विश्वास थिएन । त्यही कमाण्डका नेता प्यारा थिए, जो अपरिचित भएर पनि वर्षौं अगाडिदेखिको चिनजान जस्तो वर्गीय सम्बन्धको नजिक थिए ।
जसको वास्तविक नाम, घर र थरसमेत थाहा हुँदैन थियो, मात्र उपनामको आधारमा आफ्ना कमाण्डरहरूमाथि यत्रो भरोसा र विश्वास किन हुन्थ्यो होला ? अहिले भने त्यो वास्तविकतासँग किन पटक्कै मेल नखाएको होला त्यो भरोसाले ?
यात्रा रोल्पाको थवाङबाट रुकुमको काक्री गाविस, हालको भुमे गाउँपालिकामा रहेको हाईस्कुलसम्मको थियो । त्यो स्कुलभन्दा ३ घन्टामाथि ठूलो जंगलमा मध्य र पश्चिम कमाण्डको जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरदेखि जनमुक्ति सेनाको स्पेसल फोर्ससम्म जम्मा भएको थियो । जब म लुकुमको स्कुलमा पुगेँ, त्यस बेला क्यामेरा र टेप रेकर्डर लिएर जनमुक्ति सेनाहरूको भनाइ रेकर्ड गरिरहेका व्यक्तिमा ध्यान पुग्यो । उहाँ पश्चिम कमाण्डको प्रतिनिधि जनादेश पत्रिकाको युद्ध सम्वाददाता मनऋषि धिताल हुनुहुँदोरहेछ । पत्रकारिताका बारेमा छोटो समयमा पनि धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त भयो उहाँसँग ।